ANNKE 1080P igwefoto nyocha, onyunyo n'ime iru onye ọ bụla | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Nyocha
Taa ka anyị wetara gị a gadget na ya na ama anyi pụrụ inyere anyị aka ime ka ụlọ anyị dị nchebe karị. Otu igwefoto na njikọ IP ọ nwere ike ịbụ ngwa ọrụ ịchọrọ iji nwee ike ịdị jụụ mgbe ị hapụrụ ụlọ.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ịnwe usoro nchekwa dị mma na-efu nnukwu ego. Ma ekele maka ngwa dịka ANNKE 1080P igwefoto nke a agbanweela ka mma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla nwere ike imeli otu n’ime ha pere mpe.
1 ANNKE 1080P otu igwefoto iji chịkwaa ya niile
3 Mara mma dị nnọọ mma n'anya
4 ANNKE 1080P teknụzụ, nchekwa tinyere
4.1 Memory-ndinyanade mbịne ndekọ na nchekwa nhọrọ
5 ANNKE 1080P Nkọwapụta Nka na ụzụ
6 Uru na ọghọm nke ANNKE 1080P
ANNKE 1080P otu igwefoto iji chịkwaa ya niile
Igwefoto onyunyo IP dị taa ngwá ọrụ bara uru n'ọtụtụ ebe. Na njikọ ịntanetị yana ANNKE 1080P Anyị nwere ike ijikwa onye na-abanye ma na-apụ n'ụlọ anyị. Ma anyị nwekwara ike ịchịkwa nsị nke azụmahịa, ma ọ bụ hụ na ezigbo oge ma ọ bụrụ na nwa anyị dị mma.
O a- ihe enyere site na teknụzụ n'ọhịa nke ihe onyonyo, ma ọ bụ mgbasa ozi ndụ nke ihe na-eme, jisiri ike mee ka ndụ anyị dị mfe. Ma ugbu a na ANNKE 1080P ọ dị mfe karịa anyị nwere ike iji teknụzụ a na ọnụ ọnụahịa maka akpa ọ bụla. Lee ị nwere ike ịzụta igwefoto ANNKE 1080P na-erughị euro 50.
Ga-eleba anya n’ime igbe ahụ gwa gị ihe niile anyị hụrụ n’ime. Na mgbakwunye na igwefoto anyị nwere ọtụtụ ngwa na-eso ya. Ihe dị mma banyere nke a bụ na ọ bara uru nke na-arụ ọrụ iji mee ka ọ dị mma.
Anyị nwere caji na ijikọ eriri, na usoro Micro USB. O nwere ogologo zuru oke ka o wee rute elu dị elu n'enweghị nsogbu. Anyị chọpụtakwara a eriri netwok inwe ike ijikọ igwefoto ozugbo na rawụta anyị. Wayzọ a anyị na-eme ka njikọ kwụsie ike ma nwee ntụkwasị obi ma ọ bụrụ na njikọ Wi-Fi adịghị mma.
Anyị nwekwara a braket kpọgidere igwefoto na mgbidi ma ọ bụ n'uko. Anyị nwere ike ịkwụsị igwefoto ahụ n'enweghị nsogbu na obere ntụgharị nke eri. Maka nkwado anyị nwere kposara dị mkpa iji dozie ya.
Mara mma dị nnọọ mma n'anya
Na-ele anya na akụkụ anụ ahụ nke igwefoto a anyị na-ahụ otu esi elegharaghị akụkụ imewe ahụ anya. Wuru na plastic na-acha ọcha emechara na gloss nke ezigbo mma na nguzogide. Dị nnọọ n'ahịrị dị na ahịrị ahịrị nke teknụzụ n'afọ ndị a.
Ahụ bụ akụkụ abụọ, otu dị n’elu nke ọzọ. Na isi, nke nwere ọdịdị ọzọ dị larịị, n'azụ ya ka njikọ na ọdụ ụgbọ mmiri. Anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri maka njikọ internetntanetị njikọ. Ọ bụ ezie ọ gaghị adị mkpa ka ANNKE 1080P nwere njikọ Wi-Fi.
El Micro USB-ted na-akwụ ụgwọ ụgwọ na njikọ ọdụ ụgbọ mmiri. Anyị chọpụtakwara a Tọgharia bọtịnụ ka ihichapụ ihe omume. Na ihe yiri anyị ka ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ inweta ndekọ. a Micro SD kaadị ebe nchekwa. Dekọọ ihe niile gbara gị gburugburu na-atụghị ụjọ, zụta igwefoto ANNKE 1080P ugbu a na Amazon na ọnụahịa kacha mma.
N'ime ebe edoziri nke ntọala enwere ihe abuo nke mere ANNKE 1080P igwefoto zuru oke. Na igwe okwu na okwu ekele nke anyị nwere ike isi na onye ọ bụla dị n'ihu igwefoto anyị kwurịta okwu site na smartphone. Ma ọ bụ ụda mkpu iji gbochie ndị ọbịa achọghị.
Na elu bụ igwefoto n'onwe ya. Ọ dị n'ime okirikiri nke ahụ pivots na a isi na mpụta adiana nke karịrị 180 degrees. Ọ na-agbago na ala na otu akara ahụ karịa ihe nrịgo 180.
Na ohere a nke ịtụgharị, na ebe kwesiri ekwesi, anyi aghaghi inwe nsogbu ikpuchi ulo ma obu ulo kpam kpam. Na mgbakwunye, ekele maka teknụzụ o nwere na nke ya n’abali Onweghị ihe ga-agbanarị njikwa nke ndịiche a.
ANNKE 1080P teknụzụ, tinyere nchekwa
Na mgbakwunye ịbụ igwefoto nke na-enye ọtụtụ ọrụ. Na nnukwu ekele maka uru na ohere ọ nwere ike ịchụ. Teknụzụ nke kwadebere ya na-eme ya ngwá ọrụ dị ike nke na-enye nchebe ahụ ọzọ na anyị niile na-achọ na ngwaọrụ nke a nso.
Aka na Omume HD dị elu na mkpebi 1080-pixel. Ọ bụghị kamera onyunyo niile nwere ike ịnya isi na ha nwere Infrared LEDs maka ndekọ oge abalị. N'agbanyeghị ọkụ ahụ, ANNKE 1080P anyị ga-edekọ ihe niile gafere n'ihu oghere gị.
Otu n'ime arụmọrụ ya pụtara n'ihi ihe ọhụụ ya na ohere ọ na-enye. N'ihi ngagharị ihe mmetụta ọ nwere, anyị nwere ike ịgbalite ọgụgụ isi akpaka nsuso mode. Na ọnọdụ a, igwefoto ga-arụ ọrụ mgbe mmadụ gafere ma na-eso ya na-akpaghị aka n'oge niile. Anyị nwekwara ike ijikọ ya na mkpu na anyị nwekwara.
Zụta igwefoto ANNKE 1080P gị ebe a na Amazon ya na nkwa niile.
Memory-ndinyanade mbịne ndekọ na nchekwa nhọrọ
Otu n'ime mgbakwunye ya bụ nke ahụ atụmatụ obere bit ọnụego ndekọ. N'ihi ya enwere ike ịgbatị oge ndekọ oge a. Nchekwa nchekwa dị ukwuu nke na-agbatị kaadị nchekwa. Site na usoro a ị nwere ike idekọ ruo izu zuru oke na kaadị ebe nchekwa dị ka 64GB.
Ma ọ bụrụ na 64 GB nke kaadị ebe nchekwa ahụ agaghị ezu, ANNKE na-enyekwa ohere ịchekwa ihe ndekọ anyị na igwe ojii. Ọrụ akwụ ụgwọ nke anyị nwere ike ịnwale n'efu maka ụbọchị 30. Obere ego nke nwere ike ikwe nkwa nchịkọta dị mma nke onyonyo edere ma ọ bụrụ na mmebi ma ọ bụ ọnwụ nke kaadị Micro SD.
La Njikọ Alexa ọ na-ejekwa akara akara. Ekwesịrị itinye na netwọkụ anyị nke ngwaọrụ ejikọtara, anyị nwere ike iji ya ma nweta ntọala ya site n'inye iwu olu dị mfe. Easedị mfe nchịkwa na njikwa agaghị ekwe omume.
ANNKE 1080P Nkọwapụta Nka na ụzụ
Ndekọ 1080P HD
Oti mkpu SI
Ọhụụ abalị SI
Akụkụ 7.1 x 6.5 x 4.2 sentimita
Ahịa 45.18 €
Linkzụta njikọ ANNKE 1080P Igwefoto
Uru na ọghọm nke ANNKE 1080P
La ọhụhụ abalị dị elu Ọ na-enye gị extra functionalities.
La ọgụgụ isi akpaka nsuso technology ọ bụ nnọọ uru ngwá ọrụ maka onyunyo.
Na-adabere oti mkpu na nke na-akpata site na ngagharị ihe mmetụta na-eme ka anyị nwee nchebe.
La Njikọ Alexa eme ka ọ dịkwuo mmekọrịta na mfe iji.
Ọhụụ ọhụụ nke abalị
Ọgụgụ isi na Nchọpụta Ntanetị
Oti mkpu ihe mmetụta
Kwekọrọ n'Ozizi na Alexa
O nweghi ebe nchekwa di n’ime ya ịchekwa ihe oyiyi.
Enweghị batrị, yabụ anyị ga-achọ ụdọ ike.
Enweghị ikike onwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » ANNKE 1080P nyocha igwefoto
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị Twitter maka gam akporo na-egbu oge